कलाकारसँगको मैत्रिपुर्ण फुटबलमा नेताहरु ३ गोलले पराजित ,नेताले लाउने जर्सीको दुई लाख, कलाकारको १० हजार | Jukson
जक्सन डटकम,जेठ २३ – शनिबार दिउँसो हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष तथा अन्य नेताले हरियो रङको जर्सीमा उत्साहका साथ फुटबल खेल्न थाले । उनीहरु जस्तै मैदानको अर्को भागमा कलाकारको जम्बो टोली थियो ।
सँधै चिटिक्क टाई सुटमा देखिने नेता हुन या कलाकार झण्डै ६० जनाको संख्यामा रहेका खेलाडीहरुले मैदान सबै ढाकेको थियो । केही बेरमै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादबले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बल हस्तान्तरण गरेपछि खेल औपचारीक रुपमा सुरुभयो । राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत सुरुवाती टोलीमा थिए ।
कालाकारको तर्फबाट मदककृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंस आचार्य, सुनिल थापा, शिव श्रेष्ठ, शिवहरी पौडेल लगायतका कलाकारले खेल सुरु गरेका थिए । कहिल्यै मैदानमा नउत्रीएका राजनितिक दलका पाका नेता विरुद्ध सुरुमा त कलाकार निकै हाबी देखिए । एकबद्ध भएर खेलेका कलाकारले नेतालाई कुनैपनि काम मिलेर गरे सहजै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए ।
भूकम्प पीडितको सहयोगार्थ नयाँ पत्रिका दैनिकले आयोजना गरेको मैत्रीपुर्ण फुटबल खेलमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता केही मिनेटमै मैदानबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने २५ मिनेट मैदानमा बिताउनुभयो ।
तीन पटक खेलाडी परिवर्तन हुँदा समेत उहाँले मैदान छोड्न मान्नुभएन । स्वास्थ्यको कारणले धेरैबेर खेल्न हुन्न भनेर अरुले सम्झाउँदा समेत उहाँको स्थानमा मैदान पस्न खोजेका एमाले नेता योगेश भट्टराईले मैदानमै गएर गाह्रो भयो होला आउनुहोस भन्दा समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकछिन खेल्छु भनेर उहाँलाई फर्काउनुभएको थियो । छरितो ज्यान भएका र युवा कलाकारको अगाडी दलका नेताको केही सिप चलेन र कलाकारले खेल ३–० ले जिते । खेलमा राजनीतिक दलको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, रविन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराई लगायतका खेलाडीले उत्कृट मौका श्रृजना गरेपनि गोल गर्न सकेनन् ।
नेताले लाउने जर्सीको दुई लाख
फुटबल प्रतियोगितामा नेताले लगाएको जर्सीको मूल्य २ लाख रूपैयाँ र कलाकारले लगाएको जर्सीको मूल्य १० हजार रहेको छ।
यस्तै दर्शकको लागि भिआईपीतर्फ ५ हजार र साधारणतर्फ ५०० रहेको आयोजक नयाँ पत्रिका दैनिकले जनाएको छ।
यसरी संकलित रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
जेठ २३ – शनिबार दिउँसो हल्चोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष तथा अन्य नेताले हरियो रङको जर्सीमा उत्साहका साथ फुटबल खेल्न थाले । उनीहरु जस्तै मैदानको अर्को भागमा कलाकारको जम्बो टोली थियो ।
फेवातालमा छाडियो माछाका १० हजार भुरा
काँक्रो खान गएकी बालिका गोलीको पासोमा परिन्